Iigaraji | Eyomqungu 2022
Isoftware ephezulu yoyilo lweGaraji eyi-11 (yasimahla kunye nehlawulelweyo)
Isoftware ephezulu yoyilo lwegaraji kubandakanya zombini ezihlawulelwayo kunye neeapps ezihlawulelwayo. Yila uyilo lwendawo yakho yegaraji, ukugqiba, ukuvela kunye nesicwangciso somgangatho wokugcina.
Ukwenza isikhokelo segaraji esincinci ngombutho, ukugcinwa, ukucocwa, uyilo kunye neengcebiso zoyilo. Jonga indlela yokufumana uyilo lwegaraji elincinci.
Isikhokelo sokugqibela semibono ngombala womnyango wegaraji. Fumanisa intsingiselo yemibala yomnyango wegaraji, jonga imifanekiso yeminyango yegaraji kwaye ufumane izimvo zemibala ehambelana nayo ..
Iinkonzo kunye neengozi zegaraji eqhotyoshelweyo kunye nexabiso elifanelekileyo lokuthengiswa kwakhona. Fumanisa ukuba loluphi uhlobo lwegaraji olulungileyo kuyilo lwakho lwasekhaya.
Jonga ubungakanani begaraji eziqhelekileyo kubandakanya i-1, 2, 3 & 4 ubukhulu begaraji zeemoto kunye nomndilili wokuphakama komgangatho. Igaraji yesikwere segaraji zihlala ukusuka ...
Imibono yokuGcina iGaraji (iikhabhathi, iiRacks kunye neeYilo eziPhezulu)
Isikhokelo kwimibono yokugcina igaraji. Fumana izimvo zokuphucula ikhaya kunye neenketho zokugcina igaraji kwiikhabhathi, izixhobo zesifuba, iibhayisekile, ngaphezulu, ishelfu kunye nokugcinwa kwe-DIY
Iingcamango zeGaraji lomnyango (Isikhokelo sokugqibela)
Iingcamango zomnyango wegaraji isikhokelo sokugqibela kubandakanya ezona ntlobo zidumileyo, amanqaku kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi. Jonga imifanekiso yoyilo lwegaraji kunye nezitayile.
Isikhokelo kwiigaraji eziphathwayo kubandakanya iigaraji vs iivenkile, iintlobo zezinto ezibonakalayo, ubungakanani obudumileyo kunye neekiti ze-DIY. Jonga eyona garaji iphathekayo kunye nenqwelo mafutha yakho.
Iingcamango zeGaraji zokuPhucula (ngaphambi nangemva kwemifanekiso)
Igalari yemibono yokuguqula igaraji ukuze icwangciswe ngakumbi. Jonga ngaphambi nasemva kwemifanekiso yeeshelfu, iikhabhathi zokugcina kunye neehanger zokucoca izinto ezingcolileyo kunye nokugcina izinto. Ukongeza, ukufakwa kwe-epoxy kunye ne-polyurethane flooring kungongezwa ukwenza indawo ebutofotofo ngakumbi, enomtsalane kunye nokuhlala. Apha ngezantsi uyakufumana ngaphambi nasemva kwemifanekiso ebonisa iindlela ezifanelekileyo zokuhombisa nokucoca indawo yakho yegaraji.
Uyiguqula njani igaraji ibe sisikhokelo soyilo lomqolomba wendoda kubandakanya ukutyibilika, ukukhanya, ubume bodonga, ukugcinwa kweeshelfu, ukugcinwa, ifanitshala kunye nokuhonjiswa.
Isikhokelo kumgangatho wobungakanani beminyango yegaraji ongatshatanga, ophindwe kabini, iilori, iiRV's, iinqwelo zegalufa kunye nokunye. Jonga ubukhulu obudumileyo beengcango zegaraji.
Isikhokelo somahluko wecarport vs igaraji ngokulungileyo kunye nokubi, indleko, ukugcinwa kunye nobukhulu umahluko. Jonga ukuba igaraji okanye i-carport yeyona ilungileyo.
Iindleko zokwakha igaraji (1, 2 & 3 Isikhokelo samaxabiso eMoto)
Iindleko zokwakha isikhokelo segaraji kubandakanya i-1, 2, 3 yoyilo lwemoto. Fumana indleko eziphakathi zokwakha kunye nexabiso ngonyawo wesikwere kwigaraji engafakwanga.
Isikhokelo sokugqibela semibono yembala yegaraji. Fumanisa intsingiselo yemibala yeminyango yegaraji, jonga imifanekiso yeminyango yegaraji kwaye ufumane izimvo zemibala ehambelana nayo ..
Yintoni iGaraji yeTandem (Pros & Cons & Designs Designs)
Fumanisa ukuba yintoni igaraji yetandem kwaye ubone ubuchule kunye nobubi, ulungelelwaniso loyilo kunye noyilo. Imoto emi-2, imoto emi-3 kunye nemibono yoyilo lwegaraji.
Iindidi zeGarage Door Openers (Iipros & Cons)
Uninzi lweentlobo ezithandwayo zokuvula umnyango wegaraji. Bona izinto ezilungileyo nezingalunganga zekhaya elifanelekileyo, ibhanti, ikhonkco kunye nokuvula ngokuthe ngqo umnyango wegaraji ukukhetha okungcono ekhayeni lakho.
Ikhowudi yokunxiba yomtshato yamadoda
Iincwadi zebhayibhile ngothando
amakhonkco wesithembiso esihle kuye